ကလေးများနှင့်ကစားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ကလေးများနှင့်ကစားခြင်း
မိဘများသည် မိမိတို့ရင်သွေးငယ်များ အနာဂတ်ဘ၀လှပစေရန်၊ ပညာရေးအဆင့်မြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ငယ်စဉ်ကပင် မူကြိုကျောင်းများသို့ပို့ကြပါသည်။ မိဘအများစုသည် မိမိတို့နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသော စည်းကမ်းတင်းကျပ်သော အုပ်ထိန်းမှုများနှင့်၊ ညွှန်ကြားမှုအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရသော ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်များကိုသာ နှစ်ခြိုက်ကြပါသည်။ အဆော့သန်သောကလေးများက မိဘများကိုစိတ်ပျက်စေပါသည်။ အံ့သြစရာကောင်းသောအချက်မှာ ကလေးစိတ်ပညာရှင်များ၏ ကစားခြင်းသည် အကျိုးမဲ့သက်သက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းမဟုတ်ဟူသော အဆိုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရှင်များ၏ သုတေသနပြုချက်များအရ ကစားခြင်းသည် ကလေးများအတွက် သင်ယူရာတွင် အထိရောက်ဆုံးနှင့် အစွမ်းထက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ကလေးများသည်ကစားနည်းများမှ သူတို့ကိုယ်တိုင်အကြောင်း၊ အခြားသူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာလောက အကြောင်းကို အခြေခံအကျဆုံးသင်ယူနိုင်ပါသည်။ ကစားခြင်းက ကလေးများ၏ဦးနှောက်ကို ပုံသွင်းတည်ဆောက်ပေး ပါသည်။ အာရုံကြောများ၏ ဆက်နွယ်ဖွဲ့စည်းမှုများကိုလည်း ပို၍သိပ်သည်းအားကောင်းစေပါသည်။ ဦးနှောက်ဆဲလ်များသည် လေ့လာသင်ယူနေသည်နှင့်အမျှ ပို၍သန်မာကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကစားခြင်းသည် ကလေးများအတွက် သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာပေါင်းစုံမှကလေးတိုင်း ကစားကြပါသည်။ ကစားနည်းအမျိုးမျိုးရှိကြသလို ကလေးများအား လွတ်လပ်စွာကစားစေခြင်းက ၎င်းတို့၏သင်ယူမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ ကစားစေခြင်းဆိုရာဝယ် – ပျော်ရွှင်မှုကိုရစေခြင်း၊ ကလေးများနှစ်သက်ရာကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ် ကစားနိုင်ခြင်း၊ ကစားခြင်း၏အဆုံးတွင် ရရှိမည့်ရလဒ်ကိုဦးစားမပေးပဲ ကစားခြင်း၏ဖြစ်စဉ်နှင့် နည်းစနစ်ကိုသာဦးစားပေးခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်ဖြင့်ကစားခြင်းမဟုတ်ပဲ စိတ်ကူးတည့်ရာကစားစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကစားနည်းအမျိုးမျိုးကလည်း ကလေးများကို လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ စိတ်ခံစားမှု၊ ကာယဥာဏဖွံ့ဖြိုးမှု စသည်တို့ကို ဘက်စုံတိုးတက်အောင် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့် – ပဟေဠိကစားနည်းများမှ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်တွေးခေါ် တင်ပြတတ်ခြင်း၊ ရောင်စုံဆေးချယ်ကစားနည်းမှ ကြွက်သားငယ်များသန်မာစေခြင်း၊ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားတိုးတက်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုများအား သင်္ကေတဖြင့်ဖော်ပြနိုင်ခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ကစားနည်းများမှ အများနှင့်လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ခြင်း၊ အပေးအယူမျှခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ခြင်း စသည်ဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေပါသည်)
ကလေးများမည်သည့်အရွယ်မှစကစားသနည်းဟုဆိုသော် မွေးကင်းစလသားအရွယ်မှပင်စသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုကလေးငယ်များကိုတစ်ချိန်လုံးချီပိုးထားခြင်း၊ ကျဉ်းကျုံ့သော်ပုခက်များတွင်ထည့်ထားခြင်းမှ ၎င်းတို့အတွက်ကစားချိန်ဟု သတ်မှတ်ကာ ကျယ်ပြန့်လွတ်လပ်သော ကြမ်းပြင်တစ်နေရာတွင်ချထားပေးရပါမည်။ ဤသို့ဖြင့် ကလေးငယ်များ ခြေလက်များလှုပ်ရှားကစားနိုင်ပြီး ကာယကြွက်သားများဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အပြင် မိဘများကပါအတူတူကစားပြီး မိဘနှင့်ကလေးကြား သံယောဇဉ်လည်းပိုမိုခိုင်မြဲလာပါမည်။ ကလေးငယ်အား လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားကစားနိုင်စေရန် ကစားစရာများချထားပေးရပါမည်။ ကစားစရာများမှာ သစ်သားတုံးလေးများ၊ မွေးပွရုပ်များစသည်ဖြင့် ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်မရှိနိုင်မည့် ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါကလေးငယ်များအတွက် ကစားချိန်သည် နေ့စဉ်ပုံမှန် မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ အထိရှိသင့်ပါသည်။ တစ်ချိန်လုံးဆက်တိုက်ကစားစေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ၁၅ မိနစ် (သို့) မိနစ် ၂၀ ခန့် ၃ကြိမ်လောက် ရှိစေခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။
မတ်တပ်စမ်းကာစ၊ လမ်းလျှောက်ကာစအရွယ်ကလေးများသည် အလွန်အမင်းလှုပ်ရှားကစားကြပါသည်။ ထိုကာလများတွင် ကလေးများမထိခိုက်အောင် စိတ်ရှည်စွာ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပြေးလွှားဆော့ကစားနိုင်ချိန်တွင် ကလေးကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ပေးပြီး အိမ်အပြင်တွင်ဆော့ခွင့်ပေးပါ။ ပန်းခြံ၊ ကစားကွင်းများတွင်လည်း အခြားကလေးများနှင့်ကစားနိုင်ရန် ခေါ်သွားသင့်ပါသည်။
ကလေးများကျောင်းစနေသောအရွယ်တွင်တော့ ကျောင်းမှသတ်မှတ်ထားသော ပုံမှန်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် သူတို့နှစ်သက်သောအားကစား ၁ မျိုး (သို့) ၂ မျိုးကို အချိန်သတ်မှတ်ပေးပြီး ကစားခိုင်းရပါမည် (အသက်အရွယ် အလိုက်သင့်တော်မည့် – ရေကူး၊ တင်းနစ်၊ ဘောလုံး၊ ဘတ်စကတ်ဘော၊ ကြက်တောင် စသည်ဖြင့်)။ မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့ကလေး တွေဝေထုံထိုင်းမှုမရှိစေရန် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် လှုပ်ရှားမှုများထည့်သွင်းပေးသင့်ပါသည်။ ဥပမာ – ကျောင်းသို့လမ်းလျှောက်သွားစေခြင်း၊ အကယ်၍ ကျောင်းသည် လမ်းလျှောက်နိုင်မည့်အကွာအဝေးတွင် မရှိလျှင် ဈေးဝယ်ထွက်၍ လမ်းလျှောက်ခြင်း)။
ကလေးများကျန်းမာသွက်လက်အောင် မိဘများက ကစားနည်းများဖြင့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကလေးတိုင်းသွက်လက်ကြပါသည်။ သို့သော်တစ်ချို့ကလေးများသည် အသက်ပိုကြီးလာသောအခါတွင် သွက်လက်မှုနည်းသွားပြီး အချိန်ကိုငြိမ်သက်စွာ အသုံးချလိုကြပါသည်။ မိဘများအနေဖြင့် ကလေးများအတွက် အသက်အရွယ်အလိုက် ၎င်းတို့နှင့်သင့်တော်မည့် ကစားနည်းများကိုသိထားသင့်ပြီး ကလေးများစိတ်ပါဝင်စားအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကလေးများ ကာယစွမ်းအား၊ ဥာဏစွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကစားနည်းများက ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ကောင်းပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ကလေးအရွယ်မှာသူ့အရွယ်အလိုက်ကစားနည်းတွေကို မိဘများမှ ဖန်တီးပေး သင့်ပါတယ်။ တိုက်ခန်းမှာနေလို့၊ မြေကြီးမရှိလို့ဆိုပြီးတီဗွီရှေ့၊ကွန်ပြူတာရှေ့မှာပဲအထိုင်များနေတဲ့ ကလေးတွေအခုတလောပိုတွေ့နေရပါတယ်။ သူတို့မှာကိုယ်လက်ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်း နဲနဲလာတာလဲ သတိထားမိပါတယ်။ မရှိဘူးပြောနေတာထက် ရှိတဲ့နေရာကိုတပတ်တကြိမ်လောက်ပို့ပေးပြီးအဲဒီမှာ လွတ်လပ်စွာကစားစေခြင်းဟာ ကလေးတွေအတွက်တော့လာဘ် တပါးပါပဲ။ မိုးဇက်ပြောသလို ပဲဈေးဝယ်သွား ရင်ခြေကျင်ခေါ်သွားတာတို့၊ ကျောင်းနီးရင်ခြေကျင်ပို့တာတို့ဟာလဲနည်းကောင်းတခုပါ။
မမသဲနုအေးရေ အခုခေတ်ချမ်းသာတဲ့ကလေးတစ်ချို့က အ၀လွန်ရောဂါဖြစ်နေတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်
မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကို အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ပေးပြီး လုံလောက်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ ရှိစေချင်ပါတယ်
ကစားတာနှင့်အညီ အာဟာရကိုလည်း သင့်လျှော်သလိုကျွေးမွေးသင့်ပေသည်…။
အရှေ့ကျွန်းတွင် ကလေးများအား နွားနို့ မသောက်မနေရ စနစ်ဖြင့် တိုက်ကျွေးသောကြောင့်
အရှေ့ကျွန်းမှ ကလေးများသည် အရွယ်ရောက်သောအခါ ကွမ်ကျိုးမှ အရွယ်ရောက်လာသော
ကလေးငယ်များထက် ပျမ်းမျှ အရပ် အမောင်း မြင့်မားထွားကျိုင်းလေသည် ….
ဒီပို့စ်ကိုရေးတာက အခုကလေးတွေတော်တော်များများ ကစားချိန်မရှိကြတော့လို့ပါ
ကျောင်းနဲ့ကျူရှင်အကူး ကားပေါ်မှာအိပ်လိုက်လာပြီး အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ စာတွေအသည်းအသန်လိုက်နေရတဲ့ကလေးတွေကို သနားလို့ပါ
အင်း .. အရပ်ပဲရှည်ပြီး ဥာဏ်မကောင်းရင်လည်း အသုံးမတည့်ဘူးလေနော်
နောက်ပြီး တစ်ချို့ကလေးတွေက နို့နဲ့မတည့်ဘူး၊ ပဲနဲ့မတည့်ဘူးလို့ပြောကြတယ်
နွားနို့ မှာ ပရိုတိန်း လည်း ကြွယ်ဝတယ်ကွဲ့…
ပဲကလည်း ပရိုတိန်း လေကွယ် ….
လူ့ဦးနှောက်ဆိုတာ အလွန်အကျောတင်းတဲ့ဟာဂျီးကွယ့် …
ပရိုတိန်း ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၊ ဖက်စ် ၃မျိုးမှာမှ ညွန့်ပေ့ဆိုတဲ့
ပရိုတိန်းကို သုံးတာကွယ့် ….။
ရှိတ်စပီးယား၊ ဘားနတ်ရှော၊ ပီကာဆို ၊ အိုင်းစတိုင်း၊ ဟော့ပကင်း တို့ဟာ
သွယ်သွယ်လေးတွေကွယ့် ပညာရှိဘော်ဒီစွက်ချာ ပေါ့ကွယ် ….
ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ ကျုပ်တို့ရွာက ပညာရှိအမယ်အို ရော …သူ့ဖေဖေရောက ပိန်တယ်ကွယ့်
ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ ဦးနှောက် အချိုးချရင် ဦးနှောက်က ပရိုတိန်း ကို သုံးပစ်တာများလို့
အသားအဖြစ် မစုနိုင်လို့ ပိန်ရ သွယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွယ် ….
(ကောင်တာ မဖောက်အောင် ကြိုကာ ထားတာ…)
ပညာရှိ ဘုတ်အီး ဆိုလို့ ပေါင်ချိန်ပဲ မြင်ဖူးပါတယ်ကွယ်…
(ဖစ်ရှင်နယ်လ် ရောစွက် ကာရိုက်တာ မို့ တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ပေါင်ချိန်ဟာ ၀မ၀ မသိဘာဘူးကွယ်)
ဦးနှောက်ဟာ ပရိုတိန်း မရတဲ့အခါ အဆီကနေချက်လုပ်တဲ့ ကီတုန်းဘော်ဒီ ဆိုတဲ့ ဟာကိုသုံးတယ်ကွဲ့…
သူဟာ စက္ကင်းဂရိတ် လောင်စာမျိုးဖြစ်လို့ ပိန်းတိန်းတိန်း လေး ပေါ့ကွယ်..
ဆိုတော့ ပြန်ကောက်ရရင် နွားနို့ တွေပဲတွေ မတည့်တဲ့ ချာတိတ်တွေဟာ ဂျာပုလေးတွေဖြစ်ပီး
ဥာဏ်ရည်မမြင့်တာကတော့ ၆လက်မဒေါက် နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော…
ကိုလဲ ခလေးတွေ ကစားနေရင် ဘယ်လောက် ဆူညံဆူညံဖြစ်နေပါစေ..
သူတို့ ရဲ့ အော်ဟစ်မြူးတူးနေတာကို မင်္ဂလာတစ်ပါးလို သတ်မှတ်တယ်..
တစ်ခါတလေ ကိုပါ ၀င်ကစားပေးတယ်..
ကစားခြင်းဟာ ဥာဏ်ရည်ကော ခန္ဓာကိုယ်ကိုရော ဖွံ့ ဖြိုးစေမယ်ဆိုတာ ဗေဒင်ဆရာကိုရင်ပေါသွပ်ကို မေးနေစရာမလိုဘူး..
ဒါကြောင့် ခလေးတွေကစားနေရင် မတားမိကြပါစေနဲ့ ..လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားကြပါစေ..
ကို့ မိတ်ဆွေ ဘိုးပေ ဆိုရင် ခုချိန်ထိ သူ့ မြေးတွေနဲ့အိုးဘုတ်ဂျိုးရုပ်တမ်း ကစားနေတုန်း..
ကစားကြပါ..ကစားကြပါစေ..လို့ ပဲ ကိုပြောပါရစေ
အမြင်မှန်ရသွားပြီလား ဘဘပေါက် မာမီမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့
နာမ်စားသုံးရင် “ကိုယ်” လို့ရေးရတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်
အဲဒီ “ကို” က ဒီနေရာမှာမသုံးရဘူး
((ခလေးတွေ ကစားနေရင် ဘယ်လောက် ဆူညံဆူညံဖြစ်နေပါစေ..
သူတို့ ရဲ့ အော်ဟစ်မြူးတူးနေတာကို မင်္ဂလာတစ်ပါးလို သတ်မှတ်တယ်))
စိန်ပေါက်ပေါက် ကစားရလို့နဲ့ တူတယ် .. အီးလည်းပန်းတော့ဘူး .. :grin:
ကိုကတော့ ကို့ ဘာသာကိုချင်သလိုကိုပါ့မယ်
ရာသီဥတု အပူအအေးအလိုက် ကို့ နာမ်စားက မိုးတိမ်လို ရွေ့ လျားပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်
ကိုဟာ မိုးတိမ်လိုလူစားဖြစ်ပါတယ်.. (ဗေဒင်ဆရာလစ်တုန်း သူ့ နာမည်ခဏယူထားတာ)
ကို့ ကို လွတ်လပ်စွာ အီးပန်းခွင့်ပေးပါ
ကို့ အီးဟာ နံချင်နံမယ်.မာချင်မာမယ်.ပျော့ချင်ပျော့မယ်…သူ့ ဘာသာထွက်ချင်သလိုထွက်လာမဲ့အီးကို
ပျော့မှ ထွက်ပါ…မာမှ ထွက်ပါ ဆိုပြီး ပဲ့မကိုင်လိုက်ရင် ဖင်မှာ အီးတွေပေသွားနိုင်တယ်လေ
ခလေးတွေဟာလဲ အီးလိုပါပဲ.သွားပြီး ပဲ့ကိုင်လို့ မရဘူး
ဒါကြောင့်..သူ့ ဝါသနာအတိုင်း လွှတ်ထားပေးလိုက်ပါ..လွှတ်မထားပဲနေလိုက်ရင် အီးတွေပေသွားနိုင်ပါတယ်
ဂေဇက်ရွာ ထိပ်ပိုင်းဒေသမှာ အီးတွေပေနေကြတာမို့ 
ကိုလဲ အီးနဲ့ဥပမာပေးပြီး ရှင်းပြရတာပါ
တစ်ကယ်တော့ ကိုဟာ အီးချစ်သူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမဲ့
မချစ်သော်လဲ အောင့်ကာနမ်းဆိုသလို အောင့်ကာပဲ နမ်းခဲ့ရတာပါ…။
အီးပါချင်လို့ကို့ ကို သွားခွင့်ပြုပါဦး
ဗစ်..ဗျစ်..ဘစ်.ဘဒစ်…ဘဒစ်တစ်တစ်စ်..( အီးထွက်ကျခဲ့ပါက အခြောက်မ ဖျဲသီးတို့ အဖွဲ့ကောက်မစားရ)
ပြောရင်း ဆိုရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်က ကစားခဲ့တာတွေ သတိရလာမိတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကျန်းမာတာ ဖြစ်မယ်။
မမဆူးရေ ကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်
မိုးစက်လည်းအတူတူပဲ (ကြွားတာ မယုံနဲ့)
ပိုက်ဆံချေးတမ်းက ဒီရွာမှာ သဂျီးတစ်ယောက်ပဲကစားတယ်
နှမပေးတမ်းကော မကစားချင်ကြဘူးလား ဟင်င်င်?
အိမ်က ၂ နှစ်အရွယ် တူမ အမွှာမလေးတွေတော့မနက်ခင်း ပန်းကောက်ရင်းလမ်းလျောက် ၊ ညနေဆိုရင် အိမ်နားကျောင်းဝင်းကဘောလုံးကွင်းမှာဘောလုံးပစ်တမ်းကစား၊ ညဆိုရင် အိမ်နားက ကလေး ကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းကြီးဝိုင်းကြီး ဘယ်လောက်ကြီး ဆော့ကြတာ။ ၇ လနဲ့မွေးထားလို့ အရမ်းမထွားပေမယ့်ကျန်းမာ သန်စွမ်းလို့ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာရတယ်။
မပုလဲမေရေ လမပြည့်ပဲမွေးတဲ့ကလေးတွေလည်း မိဘအပေါ်မူတည်ပြီး ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှုကွာတယ်နော် တွေ့ဖူးတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လည်း ကျန်းမာရေးသိပ်ကောင်းတယ် ဥာဏ်လည်းကောင်းတယ်
အဲဒီ ၇ လမွေးတွေကလစေ့မွေးတွေထက်ပိုကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ပိုဆော့ကြောင်းပါ။ ( ကိုယ်တွေ့ )
ကိုဂီ… ယူမယ်ဆိုရွာမှာသားပေါက်ထားတဲ. နမလေးတော့ရှိတယ်… အလာဂါးပေးမာ
စိန်ပေါက်ပေါက်…နင့်ချီးရင် ဆီပုံးပဲ… လောလောဆယ်သုံးမရလို့ပစ်ထားရတဲ.ထောင်တန်တအုပ်တော့ ရှိတယ်… ရန်ကုန်ရောက်မှကဲရမယ်… လိုချင်ရင်လာယူ… သများပြောလိုက်တာ ငပေါက်ချီးမထွက်တော့ဘူး…. အာဟိ..
မမိုးဇက်ရေ.. သချိုင်ခီးကိုလမ်းကြုံရင်ပြောလိုက်ဦး..နော်… အကြွေးပြန်ဆပ်ဖို့… ရရင်တယောက်တ၀က်
အခု moe z တင်ပြဆွေးနွေးသွား
ဖရဲလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားတယ်ဗျ
အခုတော့ လူပျိုလေးဆိုတော့ လက်တွေ့မလုပ်သေးဘူးနော်
အင်း ဇက်လေးကိုအားပေးနေဘာဒယ်…ဒီနေ့ကစပီးဆော့မယ် မီးကုန်ယမ်းကုန်..သောက်မယ်..နို့
တ၀ကြီး…သင့်ခရုပါချင့်..မီးမီး သွားဆော့တော့မယ်နော်.. ပြန်လာခဲ့မယ်..လစ်ပီ..
ငယ်ငယ်ကတော့ အဖွားတို့ အဖိုးတို့က ကလေးဆိုတာ မြေကြီးဓာတ်ပေးရတယ် ။ ဆော့ပေးရတယ် ဒါမှ ကျန်းမာတာဆိုပြီး အိမ်က ရှိတဲ့ မောင်နှမတတွေ ဆော့လိုက်ကြတာမှ။
ခုလည်း တူတွေ တူမတွေလည်း ဆော့ကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ အပေါ်က ပြောသွားတဲ့ ပညာရှိဘော်ဒီစွက်ချာရှိတယ် ဆိုတဲ့ ပညာရှင်တွေက အသားတော့ မမည်းဘူး မဟုတ်လားဟင် မိုးဇက်။ ဟို ပိန်ပြီး မည်းခြောက်နေရင်တော့ သေချာတယ် … something…
နောက်ဆုံးကျ သများဘဲ သမကြတာတဲ့လား ..
သများလည်း အာမျိုးသာမီးရေးယာ ကိုတိုင်ဘာဒေါ့မယ်ချင့်
ကျနော်တို့ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေက လွတ်လပ်မှုမျိုး ဒီနေ့ ကလေးတွေမှာမရနိုင်တော့တာ
ပိန်တာကတော့ ဦးနှောက်က ပရိုတိန်းကိုသုံးပစ်တာများလို့တဲ့ (အဲဒါက လက်မခံလို့မဖြစ်ဘူး)
မည်းခြောက်တာကတော့ မမပူးခ်ျပြောသလို တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ
ဟုတ်တယ် အခုကလေးတွေက သနားစရာတော်တော်ကောင်းတယ်
ဆော့တဲ့ကလေး ဉာဏ်ကောင်းတာ ပျမ်းမျှချင်းအားဖြင့်တော့ မမှားတဲ့ကိစ္စပါ..
နည်းနည်းဆော့ နည်းနည်း ဉာဏ်ကောင်းတယ်..များများဆော့ များများဉာဏ်ကောင်းမှာပေါ့
ဥပဒေသ၁။ ဆော့တာသည် အရက် သို့မဟုတ် အချစ် ကဲ့သို့ တန်-ဆေး၊လွန်-ကောင်း၊များ-ဗဲဒီးဂွတ် မဟုတ်ပါ…
အဲ့ … အိပ်တဲ့အချိန် ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အချိန် လက်လက်တောက် ပြန်တော့လည်း
ဗလွတ်ရွှတ်တောက် လေး ဖြစ်သွားတတ်တယ်ခည….
စဉ်းစား-တွေးခေါ်-ဆင်ခြင်-ချင့်ချိန် တဲ့အလုပ်ဟာ ငြိမ်နေမှ လုပ်လို့ကောင်းတာကလား …
(မောင်ဂီ … ပိုင်သကွာ ….အဟတ်အဟတ်…)
ပညာရေးစနစ်ကလည်း အလတ်ကျွတ်စ် ၊
ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကျတော့လည်း လောက်လောက်တက်စ် ….
အင်း …….အင်း ……….
ဟိုအပေါ်ကမန့်သွားတဲ့ ပညာရှိဘော်ဒီစွက်ချာ ရှိချင်လို့ ၀တ်ချနေတဲ့အာကိုဂျီး…
ကိုဖီအာနန်း တို့ နယ်လဆင် မန်ဒဲလားတို့ ဆို ဖွေးဖွေးကိုလှုပ်နေတာပဲ …အာဟိ
အော် ..မုတ်ဆိတ်တို့ ဆံပင်တို့ပြောဘာဒယ်…
(မောင်ဂီ …ပိုင်သကွာ …အဟစ်အဟစ်….)
ဗမာစကားမှာ အူတိုတယ် ဆိုတာ ရှိပါ၏…. အူသည် လူ့အရပ်၏ ၅ဆခန့်ရှိတတ်သည်
ဆိုတော့ ဂျာပုများသည် လူသာမန်တို့ထက် အူတိုဖို့ ရှိပါ၏။ သည်တော့ စိတ်တိုလွယ်လေသည်။
ထို့ကြောင့် လူပုစိတ်တို ဟူသော စကားများ ပေါ်လာသလားမသိပါ… ။ သွေးကြောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
အရလည်း တိုသောကြောင့် ..ဒေါသသွေးသည် ငယ်ထိပ်သို့ မြန်မြန် ဆောင့်တက်သောကြောင့်လည်း
ဂျေပီလေးများသည် စိတ်တိုလွယ်ပေသည်….။ သို့သော် တခုလေး သတိချပ်စေချင်၏။
ဥပဒေသ၂။ ဒေါသဖြစ်ရင် အသက်တို တတ်ပါ၏။
(မောင်ဂီ …ပိုင်သကွာ …အဟင်းဟင်း….)
P.S ခင်လို့စတာပါညီမလေးရေ ….။
လူသား မစားကောင်းဘူးကွယ့် ….ကိုအင်ဂျီးကို ဘာဘီကျူ့ လုပ်ဖို့ကိစ္စ စွန့်လွှတ်လိုက်ပါကွယ်…။
နိုင်တိသောင်ဇင် ဟင်္သာ(စ်) ဇာတ် ကြားဖူးရဲ့မလား …။
စားချင်ရင်တော့ ၀ယ်ခဲ့ပါ့မယ်ကွယ် …လူထွက်ပစ္စည်း …ဟီဟိ….
ဟုတ်ကဲ့ ဆိုလိုတာက ကစားနည်းတွေက physical, mental, social, emotional ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေရစေတယ်လို့ပြောတာပါ
ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး ဦးနှောက်ကိုအလုပ်ပေးရတဲ့ ကစားနည်းတွေလည်း အများကြီးပါ
မိဘတွေက ကလေးတွေတစ်ချိန်လုံးစာအုပ်နဲ့မျက်နှာအပ်ထားတာကိုပဲ သဘောကျနေကြလို့ ကစားနည်းတွေနဲ့လည်း ဥာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တာပါ
Self Esteem Games တွေလည်း အများကြီးပါ မိဘတွေနဲ့ကစားလို့ရတယ်
ညတိုင်း ကိုရီးယားကားတွေထိုင်ကြည့်မယ့်အစား တစ်ခါတစ်ရံ မိသားစုတွေ Scrabble ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Chess ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ယူဆပါကြောင်း
ပြန်လာရင် ၀ယ်ခဲ့မယ်ပြောတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်း စေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပေမယ့် ငြင်းပါရစေ …
သမီး ရေးထားတာလေးကလဲ ကလေး ကိုယ်လက်ကျန်းမာရေး ကိုမေ့နေမဲ့ မိဘတွေ အတွက် သတိပေး Post လေးပါ။ ဖတ်ရတာ အတော်လေး အကျိုးများပါတယ်။
အရီးတို့ ဆီမှာတော့ ကလေးတိုင်းလိုလိုဘဲ လသား ကလေးထဲ က ရေထဲမှာ မိဘတွေ နဲ့ စကူး၊ ကျောင်းတက်ချိန်ကျ တော့ ကျောင်းက ရေကူးချိန် မှာကူး ဆိုတော့ ရေမကူးတတ်သူကို မရှိသလောက်ဘဲ။ နောက် ကျောင်းတွေက ကာယချိန်ဆိုတာက အဖြစ်မဟုတ်ဘဲ တကယ် လုပ်ရတာ။ ရပ်ကွက် အနှံ့ ပန်းခြံ တွေမှာ ကစားကွင်း တွေ က အလကား ဆိုတော့ စနေ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် တွေဆို ကလေးတွေ အပြည့်ဘဲ။
ဒါတောင် စစ်တမ်းတွေ အရ အရင်ကာလ တွေနဲ့ နှိုင်းရင် ကလေးတွေ က အပြင်မှာကစားဖို့ ထက် အိမ်တွင်းမှာ တီဗီဂိမ်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေ တွေကို ပိုမက်လာလို့ သတိပေးသတင်း တွေ ဖတ်ရလေ့ ရှိတယ်။
မြန်မာပြည် မှာလဲ အရင်ထက်စာရင် ကစားကွင်းတွေ ရှိလာပေမဲ့ အလကား ကို များများလေး လုပ်ပေးနိုင်ရင်အတော်လေး ကောင်းမှာ။
မောင်ဂီ့ Post တစ်ခုမှာ သမီး နာမည် ကို မသိမသာ အလွှဲသုံးစား လုပ်ခဲ့မိလို့ အရီး တောင်းပန် ချင်နေတာ။ အခု တစ်ခါထဲ တောင်းပန် သွားပါတယ်။
ဒီမှာက ရေကူးတာကို သိပ်အလေးမပေးကြဘူး
တတ်နိုင်တဲ့မိဘတွေကတော့ ဟော်တယ်တွေမှာ သွားကူးကြတယ်
ကစားကွင်းတွေလည်း အရီးပြောသလို အလကားရရင်ကောင်းမယ် အခုကတစ်ခါသွားရင် ၅ ထောင်လောက်က အနည်းဆုံးဆိုတော့ မိဘတွေလည်း အမြဲတမ်းမပို့နိုင်ဘူးပေါ့
အစိုးရကျောင်းအများစုက PE ချိန်မှာလည်း ထိထိရောက်ရောက် သင်ပေးတာသိပ်မရှိဘူး
Int’ l School က ကလေးတွေကတော့ မလုပ်မနေရ လုပ်ရတယ် PE ကလည်း Main Subject တစ်ခုကိုး၊ (ပါလာရပြန်ပြီ Int’l School က)
တီဗီဂိမ်း၊ ကွန်ပြူတာဂိမ်းစွဲပြီး တခြားလူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာ အားနည်းကုန်မှာလည်းစိုးရိမ်မိတယ်
မိဘတွေကိုယ့်သားသမီးတွေအတွက် စီးပွါးရှာတာလည်းရှာပေါ့ ကလေးတွေအတွက်လည်း အချိန်ပေးစေချင်တယ်၊
အရီးရေ တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး ခင်လို့နောက်တယ်လို့ သဘောထားပါတယ်
သမီးလည်း ဒီရွာထဲမှာ စရင်းနောက်ရင်း ကွန်မန့်တွေကနေ မရည်ရွယ်ပဲ တစ်ယောက်ယောက်ကို ထိခိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ (ကြုံတုန်းပြောရတာ)
လပြည့်နေ့တွင် လမပြည့်ဘဲ မွေးလာသောခလေး လွန်စွာကျန်းမာ၏။ ဤကား ကတ်ကင်းသဘော သဘာဝတည်း…။
အိမ်ကတူမလေးနဲ့တော့ ဘောလုံးကန်ပြီး ဆော့တယ်..
သူကတော့ ဥာဏ်ရည်တက်လာသလား မသလားတော့
မသိဘူး… ကိုရင်တော့ ပေါင်တွေ တောင့်လာဒယ်..
အချစ် – မူးယစ် – ဇာတ်တူက
ဒါနဲ့ စကားမစပ်… မိုးစက်ကော အချစ်နဲ့ ဆော့တတ်လားဟင်..
ကိုရင်က အချစ်ဆို အုန်းချစ်လောက်ပဲ သိဒလာ.. နုံပ..
ကလေးများနှင့်ကစားခြင်း(သို့)မိဘများအတွက် ဖတ်စာလို့ ခေါင်းစဉ်ပေးသင့်တယ်။
အခြစ်ဆိုလို့ မီးခြစ်နဲ့တော့မဆော့နဲ့နော် အန္တရာယ်များတယ်